Zvikoro Zvinodzidzisa Vashumiri Kuparidza Nekudzidzisa Sezvaiita Jesu | Umambo hwaMwari
Kudzidzisa Vashumiri voUmambo Kuita Basa
Kubatsirwa kunoitwa vashumiri veUmambo nezvikoro zvesangano kuti vakwanise kunyatsoita basa ravo
1-3. Jesu akaita sei kuti ushumiri huwedzere, uye izvozvo zvinoita kuti tive nemibvunzo ipi?
JESU akaparidza muGarireya yose kwemakore maviri. (Verenga Mateu 9:35-38.) Akashanyira maguta akawanda nemisha, achidzidzisa mumasinagogi nokuparidza mashoko akanaka oUmambo. Kwose kwaaiparidza vanhu vakawanda vaiuya kwaari. “Kukohwa kukuru,” akadaro, saka paidiwa vashandi vakawanda.
2 Jesu akaronga kuti basa rokuparidza rizowedzera. Akazviita sei? Nokutuma vaapostora vake 12 “kunoparidza umambo hwaMwari.” (Ruka 9:1, 2) Vaapostora vangave vakazvibvunza kuti basa racho vaizoriita sei. Nerudo Jesu akatanga avadzidzisa basa racho asati avatuma, sezvaakangoitwawo naBaba vake vokudenga.
3 Saka tinova nemibvunzo inoverengeka: Jesu akadzidziswei naBaba vake? Jesu akadzidzisei vaapostora vake? Ko mazuva ano, Mambo Mesiya ari kudzidzisawo vateveri vake kuita ushumiri here? Kana ari kudaro, ari kuzviita sei?
“Ndinotaura . . . Sokudzidziswa Kwandakaitwa Nababa”
4. Jesu akadzidziswa riini uye kupi naBaba vake?
4 Jesu akabvuma pachena kuti akadzidziswa naBaba vake. Paaiita ushumiri hwake, Jesu akati: “Ndinotaura zvinhu izvi sokudzidziswa kwandakaitwa naBaba.” (Joh. 8:28) Jesu akadzidziswa riini uyu kupi? Zviri pachena kuti Mwanakomana waMwari wedangwe akatanga kudzidziswa achangosikwa. (VaK. 1:15) Aina Baba vake kudenga, Mwanakomana akaita makore asingaverengeki achiteerera uye achicherechedza ‘Murayiridzi Mukuru.’ (Isa. 30:20) Izvi zvakaita kuti Mwanakomana awane dzidzo isingaenzaniswi nezvemaitiro aBaba vake, mabasa avo uye zvinangwa.
5. Baba vakadzidzisei Mwanakomana wavo nezveushumiri hwaaizoita pasi pano?
5 Nekufamba kwenguva, Jehovha akazodzidzisa Mwanakomana wake nezveushumiri hwaaizoita pasi pano. Funga nezveuprofita hunotsanangura ukama huri pakati peMurayiridzi Mukuru neMwanakomana wake wedangwe. (Verenga Isaya 50:4, 5.) Jehovha aimutsa Mwanakomana wake “mangwanani oga oga,” hunodaro uprofita hwacho. Mashoko aya anopa mufananidzo wakafanana newemudzidzisi anofumomutsa mudzidzi kuti amudzidzise. Rimwe bhuku rinotsanangura Bhaibheri rinoti: “Jehovha . . . anoita seanomutora achienda naye kuchikoro sezvinoitwa mudzidzi, omudzidzisa kuti achaparidza nezvechii uye sei.” “Muchikoro” ichocho chekudenga, Jehovha akadzidzisa Mwanakomana wake ‘zvaaizozivisa nezvaaizotaura.’ (Joh. 12:49) Baba vakapawo Mwanakomana wavo mirayiridzo yekuti aizodzidzisa sei. * Ari pasi pano, Jesu haana kungoshandisa zvinhu zvaakadzidza paaiita ushumiri hwake chete asi akazvishandisawo pakudzidzisa vateveri vake kuti vaite ushumiri hwavo.
6, 7. (a) Jesu akadzidzisa vaapostora vake kuitei, uye izvi zvakazovabatsira sei? (b) Jesu akava nechokwadi chekuti vateveri vake mazuva ano vanodzidziswa kuitei?
6 Jesu akadzidzisa vaapostora vake kuitei, sezvambotaurwa mundima dzokutanga? Maererano nechitsauko 10 chaMateu, akavapa mirayiridzo yemaitirwo eushumiri, kusanganisira zvinotevera: kwavaizoparidza (ndima 5, 6), zvavaizotaura (ndima 7), kukosha kwekuvimba naJehovha (ndima 9, 10), matangiro avaizoita kutaura navanasaimba (ndima 11-13), zvavaizoita kana shoko ravo rarambwa (ndima 14, 15), uye zvavaizoita kana vakatambudzwa (ndima 16-23). * Kudzidziswa basa zvakajeka kwakaitwa vaapostora naJesu kwakaita kuti vakwanise kutungamirira basa rekuparidza mashoko akanaka pakatanga ungano yechiKristu.
7 Ko mazuva ano? Jesu, Mambo weUmambo hwaMwari, akapa vateveri vake basa rinorema rekuparidza “mashoko akanaka oumambo . . . munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose.” (Mat. 24:14) Mambo akatidzidzisa kuita basa iri rinokosha kupfuura mamwe ose here? Ndizvo chaizvo zvaakaita! Ari kudenga, Mambo akava nechokwadi chekuti vateveri vake vadzidziswa kuti vanofanira kuparidza sei kune vasiri muungano uye maitirwo emabasa anokosha muungano.
Kudzidzisa Vashumiri Kuva Vaevhangeri
8, 9. (a) Chinangwa chikuru cheChikoro chaMwari Choushumiri chaiva chei? (b) Musangano wepakati pevhiki wakakubatsira sei kuti unyatsoita ushumiri hwako?
8 Sangano raJehovha ragara richishandisa magungano, nemisangano yeungano, yakadai seMusangano Webasa, kudzidzisa vanhu vaMwari kuti vaite ushumiri. Asi kutanga kuma1940, hama dzaitungamirira dzaiva kumahofisi makuru dzakatanga kuronga kuti pave nezvikoro zvaizodzidzisa vanhu vaMwari.
9 Chikoro chaMwari Choushumiri. Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, chikoro ichi chakatanga muna 1943. Chinangwa chacho chaiva chekungodzidzisa vanhu kuti vape hurukuro dzakanaka pamisangano yeungano here? Aiwa. Chinangwa chikuru chechikoro ichi chaiva chekudzidzisa vanhu vaMwari kuti vashandise chipo chavainacho chekutaura kuti varumbidze Jehovha muushumiri. (Pis. 150:6) Chaibatsira hama nehanzvadzi dzakanyoresa kuti dzive vashumiri veUmambo vanonyatsogona basa. Iye zvino misangano wepakati pevhiki ndiwo wava kubatsira hama nehanzvadzi kuti dzidaro.
10, 11. Ndivanaani vava kukwanisa kupinda Chikoro cheGiriyedhi, uye chinangwa chechikoro chacho ndechei?
10 Chikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi. Chatava kuziva seChikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi chakatanga musi weMuvhuro, 1 February, 1943. Chakatanga chiri chokudzidzisa mapiyona nevamwe vaiva munguva yakazara kuita basa reumishinari munyika yose. Asi kubvira muna October 2011, chikoro ichi chava kungopindwa nevanenge vagara vari mumabasa enguva yakazara akadai semapiyona chaiwo, vatariri vanofambira nemadzimai avo, nhengo dzeBheteri, nemamishinari asati achipinda.
11 Chinangwa chechikoro cheGiriyedhi ndechei? Mumwe ava nemakore achirayiridza muchikoro ichi anopindura kuti: “Ndechekusimbisa kutenda kwevanochipinda kuburikidza nokudzidza Shoko raMwari uye kuvabatsira kuva neunhu hwechiKristu hunodiwa kuti vakwanise kuzokunda matambudziko avanosangana nawo mubasa ravo. Uyewo chimwe chinangwa chikuru ndechokuti vadzidzi vacho vave nechido chakasimba chokuita basa reuevhangeri.”—VaEf. 4:11.
12, 13. Chikoro cheGiriyedhi chakabatsira sei pabasa rokuparidza munyika yose? Ipa muenzaniso.
12 Chikoro cheGiriyedhi chakabatsira sei pabasa rokuparidza munyika yose? Kubvira muna 1943, vanhu vanopfuura 8 500 vakadzidziswa pachikoro chacho, * uye mamishinari akadzidziswa kuGiriyedhi akashumira munyika dzinopfuura 170 pasi pose. Mamishinari anonyatsoshandisa zvaanodzidza, achiratidza muenzaniso wekushingaira muushumiri uye achidzidzisa vamwe kuita izvozvo. Kakawanda kacho mamishinari akatungamirira basa munzvimbo dzakanga dziine vaparidzi voUmambo vashoma kana kuti dzakanga dzisitorina.
13 Funga zvakaitika kuJapan, uko basa rekuparidza zvakarongwa rakanga ranyatsoti mbombombo panguva yeHondo Yenyika II. Pakazosvika August 1949, muJapan makanga muine vaparidzi vemo vasingasviki gumi. Asi pakazopera gore iroro, mamishinari 13 akadzidziswa kuGiriyedhi akanga ava shishi kuparidza muJapan. Kwakazouya mamwe mamishinari akawanda. Pakutanga, mamishinari ainyanya kuparidza mumaguta makuru chete, asi nokufamba kwenguva akazoenda mumaguta maduku. Mamishinari akakurudzira nemwoyo wose vaya vavaidzidzisa nevamwewo kuti vatore basa roupiyona. Kushingaira kwavo kwakava nezvibereko zvakawanda. Iye zvino muJapan mune vazivisi voUmambo vanopfuura 216 000, avo vanobatanidza mapiyona angasvika 86 400! *
14. Zvikoro zvesangano zvinopa uchapupu hwakasimba hwechii? (Onawo bhokisi rakanzi “ Zvikoro Zvinodzidzisa Vashumiri voUmambo.”)
14 Zvimwe zvikoro zvesangano. Vakapinda Chikoro Chebasa Roupiyona, Chikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana, uye Chikoro cheBhaibheri Chehama Dzisina Kuroora, vakabatsirwa kusimbisa ukama hwavo naJehovha uye kushingaira pabasa rouevhangeri. * Zvikoro zvose izvi zvinopa uchapupu hwakasimba hwekuti Mambo akapa vateveri vake zvose zvavanoda kuti vanyatsoite ushumiri hwavo.—2 Tim. 4:5.
Kudzidzisa Hama Kuita Mabasa Anokosha Musangano
15. Varume vane basa rekutungamirira vanofanira kutevedzera sei Jesu?
15 Yeuka uprofita hwaIsaya hunotaura nezvaJesu achirayiridzwa naMwari. “Muchikoro” ichocho chekudenga, Mwanakomana akadzidza “kupindura munhu akaneta neshoko [rakakodzera].” (Isa. 50:4) Jesu akashandisa zvaakadzidza izvi; paaiva pasi pano, akazorodza vaya vakanga ‘vachishanda zvakaoma uye vakaremerwa.’ (Mat. 11:28-30) Vachitevedzera Jesu, varume vanotungamirira vanofanira kuva vanhu vanozorodza kuhama dzavo nehanzvadzi. Saka pakarongwa zvikoro zvakasiyana-siyana zvokubatsira hama dzakagadzwa kuti dzinyatsokwanisa kushumira vadzinonamata navo.
16, 17. Chinangwa cheChikoro Choushumiri hwoUmambo ndechei? (Onawo mashoko omuzasi.)
16 Chikoro Choushumiri hwoUmambo. Kirasi yekutanga yechikoro ichi yakatanga musi wa9 March 1959, kuSouth Lansing, New York. Vatariri vanofambira uye varanda veungano vakakokwa kuti vapinde chikoro ichi chaiita mwedzi wose. Kosi yechikoro ichi yakazoshandurwa kubva muChirungu ichiiswa mumimwe mitauro, uye zvishoma nezvishoma chikoro ichi chakazotanga kudzidzisa hama munyika yose. *
Hama Lloyd Barry vachidzidzisa paChikoro Choushumiri hwoUmambo kuJapan muna 1970
17 Richitaura nezvechinangwa cheChikoro Choushumiri hwoUmambo, Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra1962 reChirungu rakati: “Munyika ino yekuti vanhu vanogara vakabatikana, mutariri muungano yeZvapupu zvaJehovha anofanira kuva murume anonyatsoronga upenyu hwake kuti akwanise kuitira vose vari muungano zvose zvavanofanira kuitirwa uye ave chikomborero kwavari. Haafanirewo kuzosiya mhuri yake achingoita zveungano chete, asi anofanira kushandisa pfungwa dzakanaka. Mukana wakazonaka zvechokwadi wakapiwa vatariri veungano munyika yose kuti vaungane paChikoro Choushumiri hwoUmambo kuti vadzidziswe kuita zvinonzi neBhaibheri zvinofanira kuitwa nemutariri!”—1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9.
18. Vanhu vaMwari vose vanobatsirwa sei neChikoro Choushumiri hwoUmambo?
18 Vanhu vaMwari vose vanobatsirwa neChikoro Choushumiri hwoUmambo. Sei tichidaro? Kana vakuru nevashumiri vanoshumira vakashandisa zvavanodzidza pachikoro ichi, vanova vanhu vanozorodza kune vavanonamata navo, sezvaingoita Jesu. Haufare here kana ukaudzwa mashoko emutsa, kana ukateererwawo uchitaura zviri pamwoyo pako, kana kuti ukashanyirwa nemukuru kana kuti mushumiri anoshumira ane hanya newe achizokukurudzira? (1 VaT. 5:11) Zvechokwadi varume ava vakagadzwa chikomborero chaicho kuungano dzavo!
19. Komiti Yokudzidzisa rinotungamirira zvimwe zvikoro zvipi, uye chinangwa chezvikoro izvi ndechei?
19 Zvimwe zvikoro zvesangano. Komiti Yokudzidzisa yeDare Rinotungamirira ndiyo rinotungamirira zvimwe zvikoro zvinodzidzisa hama dzinoita basa rekutungamirira musangano. Zvikoro izvi ndezvekubatsira hama dzinotungamirira dzakadai sevakuru veungano, vatariri vanofambira uye nhengo dzeDare Rebazi kuti dzinyatsokwanisa kuita mabasa adzo akawanda. Zvinhu zvavanodzidziswa zvinobva muBhaibheri zvinokurudzira hama dzacho kuti dzirambe dzichisimbisa kunamata kwadzo uye kushandisa zvinotaurwa neMagwaro pamabatiro adzinoita makwai anokosha adzakanzi naJehovha dzifudze.—1 Pet. 5:1-3.
Kirasi yekutanga yeChikoro Chokudzidzisa Vashumiri kuMalawi muna 2007
20. Nei Jesu akazoti tose tiri “vanhu vanodzidziswa naJehovha,” uye iwe watsidza mumwoyo mako kuitei?
20 Zviri pachena kuti Mambo Mesiya akava nechokwadi chekuti vateveri vake vose vanyatsodzidziswa. Kudzidziswa kwacho kwakabva kumusoro zvichidzika: Jehovha akadzidzisa Mwanakomana wake, uye Mwanakomana wake akadzidzisa vateveri vake. Ndosaka Jesu akazotaura kuti tose tiri “vanhu vanodzidziswa naJehovha.” (Joh. 6:45; Isa. 54:13) Ngatirambei tichishandisa mikana yose yekudzidziswa kwatinoitwa naMambo wedu. Uye ngatiyeukei kuti chinangwa chikuru chekudzidziswa kwose uku ndechekutibatsira kuti tirambe takasimba pakunamata kuti tikwanise kunyatsoita ushumiri hwedu.
^ ndima 5 Tinoziva sei kuti Baba vakadzidzisa Mwanakomana madzidzisiro aaifanira kuzoita? Chimbofunga izvi: Kushandisa kwaiita Jesu mienzaniso yakawanda paaidzidzisa kwakazadzisa uprofita hwakanga hwanyorwa mazana emakore asati azvarwa. (Pis. 78:2; Mat. 13:34, 35) Zviri pachena kuti munyori weuprofita hwacho, Jehovha, akagara aronga kuti Mwanakomana wake azodzidzisa nemienzaniso kana kuti mifananidzo.—2 Tim. 3:16, 17.
^ ndima 6 Papera mwedzi yakati kuti, Jesu “akasarudza vamwe makumi manomwe akafanovatuma mberi kwake vari vaviri vaviri” kuti vanoparidza. Akavadzidzisawo kuti vaizozviita sei.—Ruka 10:1-16.
^ ndima 12 Vamwe vakapinda Chikoro cheGiriyedhi kanopfuura kamwe chete.
^ ndima 13 Kuti uwane mamwe mashoko nezvekubatsira kwakaita mamishinari akadzidziswa kuGiriyedhi pabasa rekuparidza, ona chitsauko 23 chebhuku raZvapupu zvaJehovha—Vazivisi voUmambo hwaMwari.
^ ndima 14 Zvikoro zviviri zvapedzisira kutaurwa zvakatsiviwa neChikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo.
^ ndima 16 Iye zvino vakuru vose vanobatsirwa nezvidzidzo zveChikoro Choushumiri hwoUmambo zvinotora nguva yakasiyana-siyana zvinoitwa pashure pemakore mashoma. Kubva muna 1984, vashumiri vanoshumira vanga vachidzidziswawo nechikoro ichi.
Jesu akadzidziswei naBaba vake?
Mambo akadzidzisa sei vateveri vake kuti vave vaevhangeri?
Hama dzakagadzwa dzanga dzichidzidziswa sei kuti dziite mabasa adzo?
Ungaratidza sei kuti unokoshesa kudzidziswa kwauri kuitwa naMambo?
ZVIKORO ZVINODZIDZISA VASHUMIRI VOUMAMBO
USHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU
Chinangwa: Kudzidzisa vaparidzi kuti vabudirire kuparidza nekudzidzisa mashoko akanaka.
Nguva Yachinotora: Chinogara chichingoitwa.
Nzvimbo: Imba yoUmambo.
Vanopinda: Vose vanogara vachiwadzana neungano, vanobvuma zvinodzidziswa neBhaibheri, uye vane mararamiro anoenderana nemitemo yechiKristu. Kana uchida kunyoresa, taura nemutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu.
Kubatsira Kwachinoita: Musangano wepakati pevhiki unotidzidzisa kutsvakurudza uye kunyatsotaura mashoko zvinonzwisisika. Tinodzidzawo kuteerera kana vamwe vachitaura uye kuisa pfungwa dzedu pakuvabatsira pakunamata, kwete kungofunga nezvekunamata kwedu chete.
Arnie, uyo ava nemakore ari mutariri anofambira, anoti: “Ndakakura ndichikakama uye ndainetseka nokutarisana nevamwe. [Musangano] uyu wakandibatsira kuti ndive nechivimbo. Jehovha akandibatsira achishandisa chikoro ichi, kuti ndidzidze kufema zvakanaka pakutaura uye kusarega pfungwa dzichimbeya-mbeya. Ndinotenda chaizvo kuti ndinokwanisa kurumbidza Mwari muungano uye muushumiri.”
CHIKORO CHEVAKURU VEUNGANO *
Chinangwa: Kubatsira vakuru kuti vasimbe pakunamata uye vaite zvakanaka mabasa avo muungano.
Nguva Yachinotora: Mazuva mashanu.
Nzvimbo: Hofisi yebazi ndiyo inosarudza; chinowanzoitirwa paImba yoUmambo kana kuti Imba Yemagungano.
Vanopinda: Hofisi yebazi ndiyo inokoka vakuru.
Kubatsira Kwachinoita: Ona zvakataurwa nedzimwe hama dzakapinda kirasi yechi92 kuPatterson, New York, U.S.A.:
“Chikoro chacho chakandibatsira chaizvo kuzviongorora uye kuona kuti ndingafudza sei makwai aJehovha.”
“Ndicharamba ndichiyeuka zvandakadzidziswa kweupenyu hwangu hwose.”
CHIKORO CHEBASA ROUPIYONA
Chinangwa: Kubatsira mapiyona kuti ‘aite ushumiri zvizere.’—2 Tim. 4:5.
Nguva Yachinotora: Mazuva matanhatu.
Nzvimbo: Hofisi yebazi ndiyo inosarudza; chinowanzoitirwa paImba yoUmambo.
Vanopinda: Mapiyona enguva dzose ava negore kana kupfuura anotozivikanwa kuti anofanira kupinda saka anoudzwa nemutariri wavo wedunhu. Vamwe vava nemakore akawanda vari mapiyona asi vasina kupinda chikoro chacho mumakore mashanu apfuura, vanogona kukokwa kuti vapinde zvekare.
Kubatsira Kwachinoita: “Chikoro ichi chakandibatsira kuti ndikunde zvipingamupinyi muushumiri uye muupenyu hwangu,” anodaro Lily. “Ndavandudza chaizvo pakudzidza kwandinoita, kudzidzisa, uye kushandisa Bhaibheri. Ndava kunyatsokwanisa kubatsira vamwe, kutsigira vakuru, uye kubatsirawo kuti ungano ikure.”
Brenda, uyo akapinda chikoro ichi kaviri, anoti: “Chakandibatsira kunyatsonyura mune zvokunamata, kuita kuti hana yangu inyatsoshanda, uye kuisa pfungwa pakubatsira vamwe. Zvechokwadi, Jehovha ane rupo!”
CHIKORO CHEVACHIRI VATSVA PABHETERI
Chinangwa: Kubatsira vanenge vari vatsva paBheteri kuti vabudirire pabasa ravo.
Nguva Yachinotora: Mazuva 4 vachidzidza maawa 4 pazuva.
Vanopinda: Vaya vanenge vachizogara paBheteri kwenguva refu kana kuti vanenge vauya kuzongobatsira paBheteri kwegore kana kupfuura.
Kubatsira Kwachinoita: Demetrius, uyo akapinda chikoro ichi kuma1980 anoti: “Chikoro ichi chakavandudza madzidziro andinoita uye chakandibatsira kugadzirira kushanda paBheteri kwenguva refu. Vadzidzisi vacho, purogiramu yacho, uye mazano anobatsira zvakandipa chivimbo chokuti Jehovha anondida uye kuti aida kundibatsira kuti ndibudirire pabasa rangu paBheteri.”
CHIKORO CHEVAZIVISI VEMASHOKO OUMAMBO *
Chinangwa: Kunyatsodzidzisa vari mubasa renguva yakazara (vakaroorana, hama dzisina kuroora uye hanzvadzi dzisina kuroorwa) kuti vashandiswe zvizere naJehovha nesangano rake. Vazhinji vanenge vapinda chikoro ichi vachatumirwa kunonyanya kudiwa vaparidzi munyika dzavo. Vanenge vapinda chikoro ichi vari pasi pemakore 50 vanganzi vanova mapiyona chaiwo kwenguva pfupi mundima itsva uye munzvimbo dziri kure.
Nguva Yachinotora: Mwedzi miviri.
Hama nehanzvadzi dzinobatsirwa nokudzidziswa kwadzinoitwa
Vanopinda: Vaya vane makore ari pakati pe23 kusvika ku65 vari mubasa renguva yakazara vane utano hwakanaka uye vanokwanisa kunoshumira kunonyanya kudiwa vaparidzi vanoti, “Ndiri pano! Nditumei!” (Isa. 6:8) Vose vanopinda chikoro chacho, hama dzisina kuroora, hanzvadzi dzisina kuroorwa kana kuti vakaroorana, vanofanira kunge vava nemakore maviri akatevedzana kana kupfuura vari mubasa renguva yakazara. Vakaroorana vanofanira kunge vava nemakore maviri kana kupfuura varoorana. Murume wacho anofanira kuva nemakore maviri kana kupfuura asi akatevedzana, ari mukuru kana kuti mushumiri anoshumira. Kana chikoro chacho chichiitwa mundima yebazi renyu, pagungano remunharaunda pachaitwa musangano unopa mashoko kune vaya vanenge vachida kupinda chikoro chacho.
Kubatsira Kwachinoita: Kune vakawanda vakapinda Chikoro cheBhaibheri Chehama Dzisina Kuroora uye Chikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana, vakataura zvakanaka nezvezvikoro izvi. Muna 2013, Dare Rinotungamirira rakasarudza kubatanidza zvikoro izvi zviviri kuti zvive chikoro chimwe chete chinonzi Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo. Mapiyona akawanda achabatsirwa nechikoro ichi kusanganisira hanzvadzi dzisina kuroorwa.
CHIKORO CHEBHAIBHERI CHEWATCHTOWER CHEGIRIYEDHI
Chinangwa: Vanenge vapinda chikoro ichi vanogona kunzi vanoshanda sevatariri vanofambira, semamishinari kana kuti kushumira paBheteri. Pavanonyatsoshandisa zvavanenge vadzidza, vanobatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mundima dzavanenge vari uye pabazi.
Nguva Yachinotora: Mwedzi mishanu.
Nzvimbo: Watchtower Educational Center, Patterson, New York.
Kirasi yeGiriyedhi—Patterson, New York
Vanopinda: Vakaroorana, hama dzisina kuroora, hanzvadzi dzisina kuroorwa vagara vari mubasa renguva yakazara. Mamishinari ari mundima asina kupinda chikoro cheGiriyedhi, mapiyona chaiwo, nhengo dzeBheteri, kana kuti vatariri vanofambira nemadzimai avo, vanogona kunzi neDare Rebazi vazadze fomu vachikumbira kupinda. Vanofanira kunge vachigona kutaura uye kunyora Chirungu.
Kubatsira Kwachinoita: Mumwe murume nomudzimai Lade naMonique vokuUnited States vava nemakore akawanda vari mamishinari, vakataura mashoko anotevera:
“Chikoro cheGiriyedhi chakaita kuti tigadzirire kuenda kunyika chero ipi zvayo, kunyatsokwinya, uye kushanda nehama dzedu dzatinoda,” anodaro Lade.
Monique anowedzera kuti: “Pandinenge ndichishandisa zvandakadzidza muShoko raMwari, ndinowana mufaro mukuru mubasa rangu. Ndinoonawo mufaro iwoyo sokuratidzwa kwerudo rwaJehovha.”
CHIKORO CHOUSHUMIRI HWOUMAMBO
Chinangwa: Kudzidzisa vatariri vanofambira, vakuru uye vashumiri vanoshumira kuti vaite mabasa avo muungano uye musangano. (Mab. 20:28) Vanodzidzawo nezvematambudziko ari kusangana nevanhu vaMwari uye zvinhu zvinobatsira ungano panguva iyoyo. Chikoro ichi chinoitwa pashure pemakore mashomanana pazvinenge zvasarudzwa neDare Rinotungamirira kuti chiitwe.
Nguva Yachinotora: Mumakore mashoma apfuura, nguva inoitwa chikoro ichi yanga ichisiyana-siyana.
Nzvimbo: Chinowanzoitirwa paImba yoUmambo kana kuti Imba Yemagungano.
Vanopinda: Mutariri wedunhu ndiye anozivisa vakuru uye vashumiri vanoshumira nezvacho. Hofisi yebazi ndiyo inokoka vatariri vanofambira.
Kubatsira Kwachinoita: “Kunyange zvazvo chikoro ichi chiine zvakawanda zvokudzidza munguva pfupi, chinosimbisa vakuru kuti varambe vachifara uye kuti varambe vachiita sevarume mubasa raJehovha. Vakuru vatsva nevaya vava nemakore vanodzidza kufudza nounyanzvi uye kuti vabatane mukufunga kumwe chete.”—Quinn.
“Chikoro ichi chakatibatsira pane zvakawanda. Chakatibatsira kunzwisisa nyaya dzine chokuita nokutenda kwedu, chakatiyambira nezvengozi dzatingasangana nadzo, uye chakatipa mazano anobatsira okufudza makwai.”—Michael.
CHIKORO CHEVATARIRI VEDUNHU NEMADZIMAI AVO *
Chinangwa: Kubatsira vatariri vedunhu kuti vashumire ungano zvakanaka, vashande “zvakaoma pakutaura nepakudzidzisa,” uye vafudze vanhu vaJehovha.—1 Tim. 5:17; 1 Pet. 5:2, 3.
Nguva Yachinotora: Mwedzi mumwe chete.
Nzvimbo: Hofisi yebazi ndiyo inosarudza.
Vanopinda: Hofisi yebazi inokoka vatariri vedunhu nemadzimai avo.
Kubatsira Kwachinoita: “Takawedzera kunzwisisa kwatinoita kuti Jesu ndiye musoro wesangano. Takaona kuti tinofanira kukurudzira hama dzatinoshumira uye kubatsira ungano yega yega kuti inyatsobatana. Chikoro chacho chakatibatsira kunzwisisa kuti kunyange zvazvo mutariri anofambira achipa zano uye pamwe pacho achitomboruramisa hama, chinangwa chake chikuru ndechokudzibatsira kuona kuti Jehovha anodzida.”—Joel naConnie vakapinda kirasi yokutanga muna 1999.
CHIKORO CHENHENGO DZEDARE REBAZI NEMADZIMAI AVO
Chinangwa: Kubatsira vaya vari muMatare Emapazi kuti vatungamirire mumisha yeBheteri, kutungamirira nyaya dzeushumiri hunoitwa neungano uye matunhu anenge ari munyika mavo.—Ruka 12:48b.
Vanopinda: Komiti yebasa reDare Rinotungamirira rinokoka hama dziri muDare Rebazi kana kuti muDare Rinotarisira Basa Munyika nemadzimai avo.
Kubatsira Kwachinoita: Lowell naCara, vakapinda kirasi yechi25. Iye zvino vari kushumira kuNigeria.
“Ndakayeuchidzwa kuti pasinei nokuti ndakabatikana sei kana kuti ndapiwa basa rakaita sei, kusimba pakunamata ndiko kunoita kuti ndifadze Jehovha,” anodaro Lowell.
Cara anoyeuka chidzidzo chaakawana kuchikoro chacho achiti: “Kana ndisingakwanisi kutsanangura imwe pfungwa zvinonzwisisika, ndinofanira kutanga ndadzidza nezvayo ndisati ndaedza kuidzidzisa vamwe.”
^ ndima 63 Chikoro ichi hachisati chava kuitwa munyika dzose.
^ ndima 84 Chikoro ichi hachisati chava kuitwa munyika dzose.
^ ndima 105 Chikoro ichi hachisati chava kuitwa munyika dzose.
Ungabvisa sei zvinhu zvinovhiringidza kuti ukwanise kuzadzisa zvinangwa zvako?
Tingabatsira sei hama dzechiduku kana kuti dzichangobhabhatidzwa kuti dzifambire mberi pakunamata?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kudzidzisa Vashumiri voUmambo Kuita Basa